Fepetra fampiasana | component-mg.com
Nandinika lalina - Microcontrollers
PMIC - TOSIKARATRA dalàna - Linear
PMIC - mpanara-maso
Logic - Gates sy Inverters
PMIC - TOSIKARATRA Reference
Clock / Timing - Application manokana
Nandinika lalina - Microprocessors
PMIC - Gate Mpamily
PMIC - LED Mpamily
Logic - kapa
Interface - manokana
Linear - fanamafisam-peo - Audio
PMIC - Motor Mpamily, Controllers
PMIC - Battery lovia
Nandinika lalina - System On Chip (Soc)
Logic - tranombarotra, Mpizarazara
Clock / Timing - Real Time Clocks
Logic - Shift firaketana
Browse by Manufacturer »Browse by Product Category »New Products »
Already know the part number?
Talk to Us: [email protected]
Mila vonjy?Mifandraisa aminay
Browse by Manufacturer »Mizaha amin'ny sokajy vokatra »Vokatra vaovao »
Efa fantatrao ny isa ampahan'ny?
1. Fananana ara-tsaina.
Ny Serivisy, ny tranokala, ary ny fampahalalana rehetra sy / na atiny hitanao, henonao na iainanao amin'ny tranokala (ny 'Atiny') dia arovan'ny Shina sy ny zon'ny mpamorona iraisam-pirenena, ny mari-barotra ary ny lalàna hafa, ary an'ny Component-en. com na ny ray aman-dreniny, ny mpiara-miasa aminy, ny mpiara-miasa aminy, ny mpandray anjara na ny antoko fahatelo.Component-en.com dia manome anao lisansa manokana, tsy azo afindra, tsy miankina manokana hampiasa ny tranokala, ny serivisy ary ny atiny hanontana, hisintona ary hitahiry ny ampahan'ny ny Atiny izay nofidinao, nanome anao: (1) tsy mampiasa afa-tsy ireo kopian'ny Atiny ireo ho an'ny orinasanao anatiny manokana na ny fampiasanao manokana, tsy ny varotra; (2) aza adika na alefa ny atiny amin'ny solosaina tambajotra na mandefa, mizara, na mandefa ny atiny amin'ny haino aman-jery rehetra; (3) aza manova na manova ny atiny amin'ny fomba rehetra, na mamafa na manova ny zon'ny mpamorona na ny mari-pamantarana. Tsy misy zon'ny, lohateny na liana amin'ny atiny na fitaovana alaina alaina izay nafindra ho anao vokatr'ity fahazoan-dàlana ity. Component-en.com dia manana lohateny feno sy zon'ny fananana ara-tsaina feno amin'ny atiny rehetra alainao avy amin'ny tranokala, miankina amin'ity fahazoan-dàlana voafetra ho anao hampiasainao manokana ny atiny araka ny voalaza eto. Tsy azonao atao ny mampiasa marika na sary famantarana miseho manerana ny tranokala raha tsy misy fanekena an-tsoratra avy amin'ny tompona mari-pamantarana, afa-tsy izay avelan'ny lalàna manan-kery. Mety tsy hitaratra, hikaoka, na handrafitra ny pejy fandraisana na pejin-tranonkala hafa amin'ity tranokala ity amin'ny tranokala na pejin-tranonkala hafa ianao. Tsy azonao atao ny mampifandray ireo 'rohy lalina' amin'ilay tranokala, izany hoe mamorona rohy mankamin'ity tranonkala ity izay mandingana ny pejy fandraisana na faritra hafa amin'ny tranokala raha tsy mahazo alalana voasoratra.
2. Fanesorana ny Warranty.
Ny Component-en.com dia tsy manome antoka na fisehoana an-tsoratra momba ny vokatra rehetra, na momba ny tranokala, ny serivisy na ny atiny. Component-en.com dia mandà an-karihary ny antoka rehetra, na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba mazava, amin'ny heviny, amin'ny lalàna na amin'ny fomba hafa, ao anatin'izany, saingy tsy voafetra amin'ny, fiantohana ara-barotra azo antoka, fahasalamana ho an'ny tanjona manokana, lohateny ary tsy misy fanitsakitsahana ny vokatra, ny tranokala, serivisy ary atiny.Component-en.com dia tsy manome antoka ny amin'ny asan'ny tranokala na ny serivisy tsy ho tapaka, ara-potoana, azo antoka na tsy misy hadisoana, na izay lesoka amin'ny tranokala na serivisy Nahitsy.Component-en.com dia tsy manome antoka ny fahamendrehana na ny fahafenoan'ny atiny, na koa ny lesoka rehetra ao anaty atiny dia ahitsy. Ny tranokala, ny serivisy ary ny atiny dia omena amin'ny 'As is' sy 'raha misy'.
Ao amin'ny Component-en.com, ny mpitsidika ny adiresy IP mpitsidika dia dinihina matetika sy dinihina ho an'ny tanjona amin'ny fanaraha-maso, ary fanatsarana tsara ny tranonkalantsika ihany, ary tsy hozaraina ivelan'ny Component-en.com izy ireo.
Mandritra ny fitsidihan'ny tranonkala iray dia mety mangataka aminao izahay raha mila fampahalalana momba ny fifandraisana (adiresy mailaka, nomeraon-telefaona, nomeraon-fax ary adiresy fandefasana / faktiora) .Ny volavolan-dalàna ireo dia angonina an-tsitrapo - ary mahazo sitraka aminao fotsiny.
3. Famerana ny andraikitra.
Raha sendra izany, ny Component-en.com dia tompon'andraikitra amin'ny mpividy na amin'ny antoko fahatelo raha misy ny fahavoazana ankolaka, sendra, manokana, misy vokany, manasazy na fakan-tahaka (ao anatin'izany ny tsy ferana ny tombom-barotra very, ny tahiry very, na ny fahaverezan'ny asa aman-draharaha) mipoitra avy amin'ny na misy ifandraisany amin'ny (I) Izay vokatra na serivisy omena na omen'ny Component-en.com, na ny fampiasana ny tsy fahafahany mampiasa izany; (II) Ny fampiasana na tsy fahafaha-mampiasa ny tranokala, ny serivisy, na ny atiny, (III) Izay fifampiraharahana natao na notadiavin'ny tranokala; (IV) Ny fitakiana azo avy amin'ny lesoka, fanesorana, na lesoka hafa ao amin'ny tranokala, ny serivisy ary / na ny atiny; (V) fidirana tsy ara-dalàna na alliteration of your transmissions or data, (VI) Fanambarana na fitondran-tenan'ny antoko fahatelo amin'ny tranokala na ny serivisy; (VII) Ny raharaha hafa mifandraika amin'ny vokatra, ny tranokala, ny serivisy na ny atiny, na dia Component-en aza. com dia notoroana hevitra ny amin'ny mety hisian'ny fahasimbana toy izany.
Ny adidin'ny Component-en.com sy ny adidiny amin'ny lesoka amin'ny vokatra dia amin'ny alàlan'ny safidin'ny Component-en.com, hisolo ny vokatra tsy misy kilema na averina amin'ny mpanjifa ny vola aloan'ny mpanjifa ka tsy misy trosa mihoatra ny vidin'ny mpividy. Ny vahaolana etsy ambony dia iharan'ny fampandrenesan'ny mpividy ny lesoka sy ny fiverenany ny vokatra malemy ao anatin'ny enim-polo (60) andro aorian'ny fividianana. Ny fanafody etsy ambony dia tsy mihatra amin'ny vokatra izay nanjary nampiasaina tamin'ny fomba ratsy (anisan'izany ny tsy ferana ny statika), ny fanaovana tsirambina, ny lozam-pifamoivoizana na ny fanovana, na ny vokatra izay nopetahana na novana nandritra ny fivorian'ny, na raha tsy izany dia tsy afaka nosedraina. Raha tsy afa-po amin'ny tranokala ianao, ny serivisy, ny atiny, na miaraka amin'ny teny fampiasana, ny vahaolana tokana sy tokana anao dia ny fampijanonana ny fampiasana ny tranokala. Manaiky ianao, amin'ny fampiasanao ny tranokala, fa mety hampidi-doza anao ny fampiasanao ilay tranonkala.
Tafiditra faritra (ICs)
Inductors, Coils, KARENA
RF / RAHA sy RFID
Vokatra avy amin'i AZ
Mpanamboatra avy amin'i AZ
Copyright © 2020 Component-en.com. All Rights Reserved.
15 taona mifantoka amin'ireo singa elektronika